Antony 3 mandresy lahatra ny fametrahana ny tenanao ho lohalaharana - Manomboka anio - Blog
Antony 3 mandresy lahatra ny fametrahana ny tenanao ho lohalaharana - Manomboka anio
Fa maninona no sarotra be ny mametraka ny tenantsika ho lohalaharana?
Manontany tena ve ianao hoe maninona, amin'ny tetik'asa lehibe, no ahitantsika ny tenantsika ho faty farany? Manokana fotoana ho an'ny hafa isika, miteny hoe eny amin'ny fanoloran-tena tsy misy farany, na manaiky ny zavatra tsy tiantsika hatao amin'ny fikatsahantsika ‘olona tsara.’
Tianay ny hafa hieritreritra hoe ‘tsara’ isika, amin'izay isika afaka manomboka manome lanja ny tenantsika ho ‘tsara’ koa. Maninona isika no tsy manome lanja ny tenantsika amin'ny fialan-tsasatra? Maninona isika no tsy miampita ny tsipika fahatongavana mihitsy VOALOHANY ?
‘Olona tsara.’ Inona no dikan'izany? Matetika isika no maka seza aoriana noho ny henatra sy tahotra sao hoheverina ho tia tena. Mijanona tsy miteny hoe 'tsia' amin'ireo zavatra tsy tiantsika isika, tsy miteny ho an'ny tenantsika ary mijanona ao anaty lolom-po, mamela ny hafa hiteny momba antsika, na ho antsika. Meloka isika amin'ny fanaovana zavatra tsy zakantsika atao, na tsy te-hanao noho ny antony tsy tambo isaina, mba hitazomana hatrany ny fisehoana.
Ny olana dia, amin'ity fikatsahana ‘tsara’ ity dia manao zavatra tsy tsara fanahy amin'ny tenantsika isika.
Ity lahatsoratra ity dia hijery antony maharesy lahatra ny antony tokony hametrahanao ny tenanao ho lohalaharana, fa andao hatomboka hatrany am-piandohana…
Ahoana no nitrangan'izany?
Miorina amin'ny fahazazana izahay ka mametraka ny toerana voalohany amin'ny hafa. Ankehitriny tsy zavatra ratsy io fa anisan'ny manome sy mandray ny fiainana. Tokony ho fantatsika mialoha fa misy olon-kafa mitarika ny fiainana miaraka amintsika, ary ny fitondrana azy ireo amin'ny fanajana izay tiantsika hitondrana antsika dia hahatonga ny diantsika ho mahafinaritra kokoa.
Na aiza na aiza misy an'io dia nanjary nivily lalana io, ary ho an'ny maro amintsika, dia farany tonga amin'ny zava-drehetra isika, amin'ny anaran'ny 'tsara.'
Avereno jerena ny fahazazanao, impiry ianao no notenenina hoe 'tsara', 'oroka ny dadatoanao,' na 'mamihina ny mpiara-monina aminao'? Impiry ianao no noterena handefitra olona sy fitondran-tena tsy zaka be amin'ny anaran'ny tena olona tsara ve? Enga anie Andriamanitra tsy te hifanerasera aminao satria tsy nahatsapa izany ianao, na tsy te ho terena hanoroka sy hamihina ny mpianakavin'ny fianakaviana lavitra na olon-dehibe tampoka mba tsy hatao hoe zaza ratsy ianao ary afaka mamonjy tarehy ny ray aman-dreninao.
Nisy fotoana, lasa nanjary lalim-paka ireo fihetsika nampihavana ireo. Be loatra, ka izao, mangataka ny filàntsika hihaona na fametrahana fetra Tsy azo atao izany ho an'ny olon-dehibe sasany. Rehefa nihalehibe ianao dia lasa nahazatra ireo antenaina ireo izay nanadino ny zavatra ilainao sy ny fanirianao mandra-pialanao andraikitra amin'ny hoe 'toy izany ihany.'
Tonga ny fotoana okana amin'ny filazanao hoe tsia. Fotoana izao mba haha ​​okana anao manana toerana malalaka ho anao, tsy misy fanelingelenana, hamerina indray ary ho afaka amin'ny fitakian'ny hafa. Zava-dehibe ny afaka amin'ny heloka noho ny faniriana hanome izay ilainao.
Mametraka sisintany indray
Mandrosoa haingana amin'ny fahatanorana. Mandany ora maro, ary dolara tsy tambo isaina amin'ny fandriana mpanolotsaina izahay manontany tena hoe maninona isika no tsy manana fahatokisan-tena, nahoana no be asa loatra, ary maninona no tsy mahomby ny fifandraisanay.
Ny fametrahana ny tenanao ho lohalaharana dia dingana tsara iray amin'ny famerenana ny fifehezana sasany izay nampianarina anao hanome izany taona maro lasa izay. Nampifangaro ny fitiavan-tena tamin'ny fikolokoloana tena izahay. Izahay dia nanery ny tenanay hino fa ny tsy fanaovan-tsoa dia hisy vokany manimba eo amin'ny fiaraha-monina, fa ny tena zava-misy dia: ny 'vokany manimba' dia ao anatiny fa tsy ivelany.
Ka inona avy ireo tombony azo amin'ny fametrahana ny tenanao ho lohalaharana? Inona no hitranga rehefa tsy mianatra ireo lesona nampiharina tamin'ny fahazazana ianao ary mieritreritra ny zavatra ilainao sy ny fanirianao indray mandeha?
ny hany tadiaviko dia ny mahatsapa fa tiana aho
Ny vatanao sy ny sainao dia hisaotra anao amin'izany
Rehefa manomboka mametraka ny zavatra ilainao ho lohalaharana ianao dia hahita fanatsarana lehibe eo amin'ny fahasalamanao ara-tsaina sy ara-batana. Rehefa ekenao ny filanao, na dia ireo tena ilaina indrindra aza, toy ny, 'Tsia, miala tsiny, tsy afaka mivoaka aho anio alina, reraka aho ary mila miala sasatra.', Na ireo mampihetsi-po, 'Tsia, izaho tsy mila mba hivoaka dia mila fotoana kely ho an'ny tenako aho. ', manome hery azy io, ary mahasalama.
Tadidio: tsy nandratra olona na iza na iza ianao tamin'ny fandavanao ny fanasana na dia mety ho diso fanantenana izy ireo tamin'ny voalohany, dia ho velona izy ireo.
Ny nataonao kosa dia ny fifehezana ... ary tena afaka tokoa izany fahatsapana izany. Ho tsara kokoa ianao amin'ny fijoroana ho anao. Raha ara-batana ianao dia namorona toerana hamelomana indray sy hikolokoloana ny vatanao amin'ny alàlan'ny fahazoana an'io fotoana tsy dia ilaina io, ary ara-tsaina, amin'ny fampahafantarana ilay iray hafa fa tsy tokony hisy ny antony noforonina, tsotra, “Tsia, Tsy te hivoaka fotsiny aho. ” dia ampy.
Tsy maninona ny miteny tsia tsy misy antony hafa noho ny zavatra tsy tianao atao. Rehefa tsy miaina eo ambany ziogan'ny andraikitra ara-tsosialy ianao dia hisaotra anao ny sainao sy ny vatanao.
Toetra tsara toetra 5 manintona ny fahasambarana sy ny fifandraisana salama
Ahoana no atao hoe manetry tena marina, ary nahoana no mendrika izany
Ny lemaka mangatsiaka mankany amin'ny tsy firaikana: fampitandremana ho an'ny empaths rehetra
Ahoana ny famelana heloka ny tenanao: 17 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
Na dia eo aza ny lolompo
Tsy misy ratsy noho ny hoe eny, rehefa tsia no tianao holazaina. Matahotra kokoa ny vokatry ny sivana ara-tsosialy noho ny tahotra ny handoavan-ketra ara-batana ny vatantsika isika, na hihoatra ny saintsika ara-tsaina mba hahatonga ny hafa hahatsapa ho tsara kokoa sy hitazona ny marika ‘bandy tsara’ antsika.
Rehefa manaiky hanao zavatra tsy tianao ianao dia miafara amin'ny fanaovana lolom-po. Tsy miseho feno ianao satria sahirana loatra mieritreritra ireo zavatra mety ho nankafizinao, na mila vitaina izany, fa napetraka amin'ny mpandoro lamosina mba hametrahana ny filan'ny hafa aloha.
Ianao koa, tsy nahy, lasa doormat. Manokatra ny varavarana 'araraoty aho' satria mandefa ny hafatra ho anao fa ny 'eny' dia ny toerana misy anao ary mandray tsara foana ianao.
Tadidio: Tsy mila mamorona fialan-tsiny be pitsiny momba ny antony tsy te-hanao zavatra ianao. Tsy ampy ny…
Rehefa manery anao hikarakara zazakely maimaimpoana ny rahavavinao amin'ny fotoana zato, ary mamaly ianao hoe: 'Tsia, tsy te hijery an'i Suzie aho anio alina, mila fotoana ho an'ny tenako aho.'
Rehefa manosika anao hanome ny fanomezana fampakaram-bady farany ny olona any am-piasana, fanolorana fanaovam-beloma, fandroana zazakely, na tahiry “mivarotra sôkôla ho an'ny fiantrana” ny zanako, miteny fotsiny hoe, “Tsia, manana asa soa efa natolotro.” na 'Miala tsiny aho, azoko antoka fa mahafinaritra i Sally, saingy tsy fantatro izy ka tsy hanatrika / hanome.'
Rehefa nanolo-tena an-tsitrapo tamin'ny fivarotana fanaovan-tsakafo an-tsekoly ny zanakao ianao ary amin'ity taona ity dia reraka ianao ary tsy te-hanao izany intsony, fa noteren'ny ray aman-dreny hafa ianao na antenaina noho ny fanatrehana taloha, tsotra “I fantatro fa nanampy tamin'ny telo taona lasa aho, fa amin'ity taona ity dia tsy hanao mofo / manatrika / manampy aho. Manana drafitra hafa aho. ” dia ampy.
Tsy misy amin'ireto toe-javatra ireto no misy loza mitatao amin'ny ainy ary azo tantanana avokoa izy ireo nefa tsy manery anao. Ny ‘drafitra hafa’ ataonareo dia tsy mila fanazavana fanampiny. Ampahany amin'ny fametrahana fetra izany. Ny zava-misy izay nasehonao fa tsy afaka na tsy tianao dia famantarana ampy. Ny olona tsy manaja ny fetrao, na mahatsapa fa manana fanazavana izy ireo dia olona tsy ilainao amin'ny fiainanao.
Miomàna: rehefa miteny foana ianao hoe eny, ary avy eo manomboka miteny tsia ary mametraka ny filanao sy ny tadiavinao ho lohalaharana, dia hibontsina ny olona. Ho sosotra izy ireo, ary ho tezitra mihitsy aza, satria efa zatra mandre “eny” tsy azo lavina avy aminao. Raha, rehefa nandà ianao, dia mbola tsy manaja ny fanapaha-kevitrao, mety mila mandinika indray izany fifandraisana izany ianao.
Hiroborobo ny fifandraisanareo
Tsy afaka mitia olona iray manontolo ianao raha tsy tia ny tenanao na mitandrina ny tenanao. Ahoana no ahafahanao maminavina ny filan'ny olon-kafa sy tadiaviny nefa ianao tsy manana hevitra mazava momba ny anao?
Manomboka aminao ny zava-drehetra: raha te hanana fahaizana mizara amin'ny fifandraisana salama amin'ny olona iray ianao dia mila mahay manamafy ny filanao ary mamela azy ireo hanana toerana hanamafisany tsara ny azy ireo. Marina izany manome ary raiso rehefa misy olona roa afaka hanaiky izay ilainy nefa tsy matahotra valifaty, na hahafoy azy ilay olona noho ny fitenenany.
Tsy resaka fifandraisana tantaram-pitiavana fotsiny io fa mihatra amin'ny olona rehetra mihaona aminao. Ilay 'olona tsara' saro-kenatra nenjehinao tamin'ny andronao rehetra? Io olona io dia ao, ary nisy foana. Ny zavatra mampihomehy dia ny fitandremana ny tenanao aloha no mahatonga anao ho olona tsara kokoa satria amin'izay ianao vao afaka manatrika feno, izay tianao hisy, miaraka amin'ireo olona tianao ho eo akaiky, ary vokatr'izany dia mifarimbona amin'ny zava-dehibe amin'ny fiainana ianao. .
Araka ny voalaza, 'Tsy afaka mandraraka amin'ny kapoaka foana ianao.'
te hanana manokana izy aorian'ny daty 3
alpha vavy tsy mihazakazaka amin'ny dikany midika
inona no hatao rehefa tsy mahatsiaro manao zavatra ianao
ampangaina ho misoloky rehefa tsy manan-tsiny
ahoana no hahafantaranao fa tsy miditra aminao intsony izy
zavatra mahafatifaty apetraka ao anaty taratasim-pitiavana